इलाम सदरमुकाममा सिनेमा हल निर्माण हुने
इलाम : इलाम सदरमुकाममा मोटर पार्किङसहितको बहुतले चलचित्रघर निर्माण हुने भएको छ । प्रदेश सरकारको रु ११ करोड १० लाख ३९ हजार ८३८ लागतमा सिनेमा हल निर्माण हुन लागेको हो । भवनमा एक तला भूमिगतसहित तीन तला पार्किङस्थल र चौथो तलामा दुई सिनेमा हल र फुड कोर्ट रहने नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले बताए ।
बसपार्कमा रहेको चार रोपनी क्षेत्रफलमा दुई सिनेमा हलका लागि प्रतिहल २५० जना क्षमताको भवन बन्नेछ । भवनमा ४७ साना सवारी साधन र २०० भन्दा बढी मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सकिनेछ । विसं २०७९ चैत ३० सम्म सम्पन्न गर्ने गरी कवीन्द्र नवसिर्जन्स जेभी कम्पनीले जिम्मा लिएको छ । अहिलेको बसपार्क साँघुरो भएपछि नगरले नयाँ बसपार्क बनाएको छ ।
सोही ठाउँमा पार्किङस्थलसहितको चलचित्रघर बनाइने भएको हो । स्थानीयवासीले इलाममा सिनेमा भवन बनाउन माग गरेपछि एकै ठाउँमा सिनेमा भवन र पार्किङस्थल बनाउन लागिएको हो । अहिले सिनेमा हलका लागि गौतम बुद्ध सभागृहको भवन भाडामा लिनुपर्ने बाध्यता छ ।
नगरले सोही भवन निर्माणका लागि एक वर्षअघि नै रु २३ करोडमा निर्माण गर्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रदेश नं १ सँग भने १७ रु करोडमा सम्झौता भएको थियो । अहिले नगरपालिकाले भवन निर्माणका लागि रु ११ करोडमा ठेक्का दिएको नगर प्रमुख बस्नेतले जानकारी दिए ।
भारतीय कलाकार रजनीकान्त नयाँ पार्टी खोल्दै
एजेन्सी : भारतका चर्चित चलचित्र कलाकार रजनीकान्तले नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा गरेका छन् । विषेश गरेर तमिल सिनेमाबाट धेरै चर्चामा रहेका रजनीकान्तले आफूले नयाँ पार्टी खोल्न लागेको बिहिबार जानकारी दिएका हुन् । उनले पार्टीको औपचारिक घोषणा भने यही डिसेम्बर ३१ तारिखका दिन गर्ने पनि बताएका छन् ।
तमिलनाडुमा निर्वाचन हुन लागेको पूर्व सन्ध्यामा उहाँले पार्टी खोल्ने र निर्वाचनमा जाने बताउनु भएको हो । “हामीले एउटा नयाँ राजनीतिक पार्टी गठन गरेर घोषणा गर्न लागेका छौँ, जनवरीदेखि दर्ता गरेर त्यसले काम गर्न थाल्ने छ, त्यस मार्फत हामीले अत्यन्त कडाइका साथ काम गर्नेछौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत उनले दिएको जानकारीअनुसार पार्टी खोल्ने निर्णयमा पुग्नु अगाडि उनले धेरैसँग परामर्श गरेका थिए । “मैले पटक पटक विभिन्न व्यक्तिहरुसँग छलफलहरु गरेँ, उहाँहरुको सल्लाह सुझावलाई लिएर मैले पार्टी खोल्ने निर्णयमा पुगेको हुँ,” उनले भनेका छन् ।
आफूलाई धेरैले सहयोग गर्ने भरोसा पलाएको र आवश्यकता पनि देखिएको कलाकार रजनीकान्तले उल्लेख गरे । तमिलनाडुमा सन् २०२१ को अप्रिल देखि मे सम्म विधान सभा निर्वाचन हुने तय भएको छ ।
अभिनेत्री श्वेता विवाह बन्धनमा बाँधिदै
काठमाडौँ : अभिनेत्री श्वेता खड्का विवाह बन्धनमा बाँधिदैछिन् । उनी यही मंसिर २२ गते धनगढीका विजयेन्द्रसिंह रावतसँग विवाह गर्न लागेकी हुन् ।
बुधवार विवाहको कार्ड सार्वजनिक भएपछि उनीहरु विवाह बन्धनमा बाँधिन लागेको पुष्टि भएको हो । विवाह गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टमा हुने कार्डमा उल्लेख छ ।
श्वेताले चलचित्र ‘कहाँ भेटिएला’बाट नेपाली चलचित्रमा अभिनेत्रीको रुपमा डेब्यू गरेकी हुन् । सो चलचित्रमा स्वर्गीय अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठको जोडीको रुपमा देखिएकी उनले पछि अभिनेता श्रेष्ठसँगै २०७१ साल असार २३ विवाह गरेकी हुन् । तर, विवाह बन्धनमा बाँधिएको एक महिनापछि साउन २५ श्रीकृष्णको उपचारकै क्रममा निधन भएको थियो ।
गायक सपुतको ‘फुटेका चुरा’ ट्रेन्डिङमा
गायक प्रकाश सपुत र गायिका अनिता चलाउनेको स्वर रहेको गीतको म्यूजिक भिडियोमा गायक सपुतसँगै कलाकार नम्रता श्रेष्ठ, कविता नेपाली, गायिका चलाउने र नीरज पन्थीको अभिनय छ । गीतमा गायक सपुतकै शब्द र सङ्गीत छ । भिडियोको निर्देशन पनि सपुत आफैँले गरेका छन् ।
गायक सपुतको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गीतमा चार हजारभन्दा बढीले प्रतिक्रिया दिएका छन् भने ३४ हजारले ‘लाइक’ गरेका छन् । कुनै एक देशको रानी युद्धकला र नाचगानमा पोख्त दरबारको सिपाहीसँग आकर्षित भएको प्रसङ्गबाट गीतको उठान हुन्छ । भिडियो निर्माण पक्ष पनि उत्कृष्ट छ ।
गीतमा प्रयुक्त तुक्कालाई बीचबीचमा काव्य वाचनको शैलीमा गरिएको प्रस्तुती रुचिकर लाग्छ । कुनै पुरुष पात्रले छोरीलाई कथा सुनाएर शुरु भएको गीत कथामै अन्त्य हुन्छ । दरबारको साङ्गीतिक समारोहमा नाचिरहेका सिपाहीलाई रानीले धनुषले ताकेर तीर हान्छिन् । सिपाही घाइते बनी डबलीमा ढल्न पुग्छन् ।
आफ्नो मनमा सिपाहीले नजरको जुठो हालेको भन्दै रानीले वाण हानेको बताउँछिन् । मन्त्रीलाई बोलाएर उपचारका लागि वैद्यलाई देखाउन आदेश दिन्छिन् । घाइते सिपाही मरे शहीद बन्ने र बाँचे राजा बन्ने घोषणा गर्छिन् । गीत यत्तिकैमा सकिन्छ । त्यसपछिको कथालाई अर्को गीतमा जोड्ने गायक सपुतले बताए ।
“गीतको परिकल्पनादेखि दृश्य निर्माणमा केही नयाँपन दिन खोजिएको छ”, गायक सपुतले भने, “राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको छ, दर्शक-श्रोताले रुचाइदिनुभएको छ, हामी उत्साहित छौँ ।” गायक सपुतले गायिका चलाउनेसँग पहिलोपटक सहकार्य गरेका हुन् ।
बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–३ धम्जामा जन्मनुभएका गायक सपुतको गत तीजमा सार्वजनिक गीत ‘बदला बरीलै’ पनि युट्युब ट्रेन्डिङको शीर्ष स्थानमा उक्लेको थियो । त्यसअघि उनका ‘बोल माया’, ‘गलबन्दी’लगायतका गीत पनि सर्वाधिक सफल रहे । गत वर्ष सार्वजनिक लोकदोहोरी गीत ‘गलबन्दी’ युट्युबमा अहिलेसम्म पाँच करोडभन्दा बढी पटक हेरिएको छ ।
सपुत गायनसँगै अभिनय, लेखन र निर्देशनमा समेत उत्तिकै पोख्त छन् । गायक सपुत चलचित्र प्रदेशी–२ मा नायकका रूपमा देखिदै छन् । चलचित्रको अहिले छायाङ्कन भइरहेको छ ।
चौतारी ग्रुपको ‘हेरी देउन मायाले’ बजारमा (भिडियोसहित)
काठमाडौं : चौतारी ग्रुपले रोइला दोहोरी गीत ‘हेरी देउन मायाले’ बजारमा ल्याएको छ । चौतारी ग्रुपको पहिलो प्रस्तुती रहेको यस गीतमा मनु सापकोटाको लय, शब्द रहेको छ ।
गीतमा गायक किशन काले र गायिका तारा शाहीको स्वर रहेको छ । गीतको म्युजिक भिडियो मंगलबार एस. थ्री. के.इन्टरटेन्मेन्ट युट्युवबाट सार्वजनिक गरिएको छ । गीतलाई अर्जुन थापाले निर्देशन गरेका छन् भने सुशील डाँगीले छायांकन तथा सम्पादन गरेका छन् । भिडियोमा प्रीतम थापा र मनु सापकोटाको अभिनय छ ।
यस गीतले मायाप्रितिका विषयलाई रोइला लयमा प्रस्तुत गरिएको छ । गीत सार्वजनिक हुनु अगाडी नै टिकटकमा लोकप्रियता पाएको चौतारी ग्रुपका हरि अधिकारीले जानकारी दिए । चौतारी ग्रुपले छिट्टै अर्को दोस्रो प्रस्तुती ल्याउने तयारीमा रहेको अधिकारीले बताए ।
बेलायत निवासी दिप्ताले ल्याइन् ‘यो जिन्दगी’
काठमाडौं : बेलायत निवासी दिप्ता थापाको स्वर रहेको गीत ‘यो जिन्दगी...’ सार्वजनिक भएको छ । म्युजिक भिडियोसमेत बनेको गीत बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गा वहादुर सुवेदी ‘दुबसु’ले एक समारोहबीच सार्वजनिक गरेका हुन् ।
शिखर सन्तोषको संगीत रहेको गीतमा सन्जित देउजाको शब्द रहेको छ । गीतको भिडियो पनि गायिका दिप्तानै देखिएकी छन् । जसको कोरियोग्राफी उनकै आमा सुनिता गौतमले गरेकी छन् । भिडियोमा छायाँकन, सम्पादन र निर्देशन कुशल श्रेष्ठको रहेको छ ।
गीत र भिडियोले प्रवासमा हुर्किएका नयाँ पुस्तालाई नेपाली गीतसंगीतमा लाग्न साथै कला, संस्कृतिको संरक्षणमा गर्न प्रेरित गर्ने विश्वास आफुमा रहेको गायिका दिप्ताले बताइन् ।
‘नक्कली साली’ पछि योगेश र विजयले ल्याए ‘बारीको कर्कलो’ (भिडियोसहित)
काठमाडौं : निक्कै रुचाइएको लोकगीत ‘नक्कली साली’ पछि गीतकार विजय दर्पण र सङ्गीतकार योगेशकाजीको पछिल्लो गीत ‘बारीको कर्कलो’ सार्वजनिक भएको छ । विष्णु माझी र बाबुकृष्ण परियारको स्वरमा रहेको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको हो ।
विजय दर्पणको शब्द, योगेशकाजीको सङ्गीत, गोविन्द पराजुलीको रेकर्डिस्ट र एचबीएन किस्मतको मिक्सिङ तथा माष्टरिङ रहेको छ ‘बारीको कर्कलो’ मा । गीतमा निश्चल गुरुङ, सुरज लामिछाने, ज्ञानु परियार र जमुना सोनामको कोरस स्वर रहेको छ ।
राजकुमार मगरको निर्देशन तथा सम्पादन रहेको सार्वजनिक गीतको भिडियोमा प्रकाश सपुत र केकी अधिकारीलाई फिचरिङ गरिएको छ । अजय रेग्मीको छायाँकन तथा ड्रोन रहेको भिडियो राजिव समरको कोरियोग्राफी रहेको छ ।
अमेरिकमा बसेर गीतलेखनमा सक्रिय नाम हो विजय दर्पण । उनका धेरै गीत स्रोता/दर्शकमाझ लोकप्रिय छन् । योगशसँग विजयको यो दोस्रो सहकार्य हो । यसअघि यिनिहरुको सहकार्यमा ‘नक्कली साली’ सार्वजनिक भएको थियो ।
‘बाजातालमा’ निर्मल र पुजनको रोमान्स
काठमाडौं : मंसिर महिना लागेसँगै विवाहका लगनहरु पनि जुर्दै छन् । यही विवाहका लगनहरु तथा लगनका महिनाहरुलाई लक्षित गरी विवाहका भाकाहरु बजारमा आएका छन् । कोरोना महामारीलाई मध्यनजर राख्दै भर्खरै मात्र नेपलीहरुले आफ्नो महानपर्व बडा दशैं र तिहार मनाएका छन् । अब फेरी यो विवाह तथा लगनहरु पनि कोरोना कहरमै सम्पन्न गर्न बाध्य छन् ।
यही कोरोना कहरमै नयाँ बाजागीत ‘बाजातालमा’ बजारमा आएको छ । गीतमा गायक भूवन सापकोटा र गायिका जुना शिरिश मगरको स्वार रहेको छ । जसमा शब्द तथा संगीत भूवन सापकोटाको नै रहेको छ, भने बिनोद बाजुरालीको संगीत संयोजन रहेको छ । गीतको म्युजिक भिडियोतर्फ सिर्जन बरालको निर्देशनमा निर्माण तय भएको छ ।
जसमा पछिल्लो समयका निकै फुर्तिला मोडल निर्मल क्षेत्री र अर्की महिला मोडल पुजन घिमिरेको नृत्य तथा रोमान्स् देख्न सकिन्छ । म्युजिक भिडियोलाई सिर्जन बरालले नै छांयाकन गरेका हुन् भने अमृत चापागाईले सम्पादन गरेका हुन् । ‘बाजातालमा’ गीतको म्युजिक भिडियोलाई गायकद्वय भूवन सापकोटाको युट्युव च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको छ ।
कोरोना संक्रमित मनोज गजुरेललाई आईसीयुमा राखेर उपचार गरिँदै
काठमाडौं : कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका हास्य कलाकार मनोज गजुरेलको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई थप उपचारका लागि काठमाडौं बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालको आईसीयुमा राखिएको छ ।
घरमै आइसोलेसनमा बसेको समस्यामा स्वास्थ्य गम्भीर भएपछि उनी बुधबार अस्पताल भर्ना भएका थिए । गजुरलेमा अक्सिजनको कमी र फोक्सोमा संक्रमण देखिएको उपचारमा सग्लन चिकित्सकले बताएका छन् । गजुरेलमा कार्तिक १० गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
अर्जुन बोसेलको ‘गोठालो’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौं : नेपाली गीत संगीतको बजारमा अर्जुन बोसेल कुनै नौलो नाम होइन । माया प्रेम, वेदना र राष्ट्रिय गीत सिर्जना गायनमा अब्बल बोसेलका २२ वटा गीत बजारमा आइसकेका छन्, जुन गीतले नेपाली स्रोताको मन जितेको छ ।
अमेरिकालाई कर्म थलो बनाउँदै आएका अर्जुन बोसेलले आफ्नो सांगीतिक यात्राको अर्काे चरणमा नयाँ शैलीको प्रेम कथामा आधारित ‘गोठालो’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा प्रेमिल जोडी छुटाउन गरिएका अनेक प्रयत्नलाई उतारिएको छ । सधैं नभए पनि कहिलेकाही सँगै मर्ने र सँगै बाच्ने कसम पूरा भएको कथा गीतमा उनिएको छ ।
बोसेलको आफ्नै शब्द, संगीत र स्वर रहेको नयाँ गीत ‘गोठालो’ को दृष्य परिकल्पना पनि उनकै छ । प्रेम कथामा आधारित ‘गोठालो’ को म्युजिक भिडियोलाई देवेन्द्र बब्लुले निर्देशन गरेका छन् भने सुशील विकले सम्पादन गरेका छन् ।
सो भिडियोमा योगेश काजी, देवेन्द्र बब्लु, गीता ढुंगाना, अर्जुन आचार्य, भद्र कुँवर, विशाल घिमिरे, टंक कार्की, निता थकाली, सुनिता घिमिरे, प्रिति तामाङ, सुदिक्षा थकाली लगायतले अभिनय गरेका छन् ।
‘गोठालो’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियोमा नयाँ कन्सेप्ट अपनाइएको छ । पुरानो प्रेम कथालाई भिडियोमा उतारेका छन् । निर्देशक देवेन्द्र बब्लु भन्छन्, गीतलाई न्याय गर्नेगरी लोकेसन चयन र प्रस्तुतीलाई निक्कै ख्याल गरिएका कारण म्युजिक भिडियो राम्रो बनेको छ ।’
यसअघि गायक बसेलले ‘आँखाको भाकाले’, ‘सम्झनाले मन हास्ने’, ‘मेरो नेपाल’, ‘बगेको खोली’, आमालाई सम्झेर’ लगायतका चर्चित गीत बजारमा ल्याइसकेका छन् । उनले केही गीलाई भने नेपाली र स्पेनिस्, नेपाली र अंग्रेजी भाषा मिलाएर पनि गीत रेकर्ड गराएका छन् ।